पति वा पत्नीबीचका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने! - Pahilo Click
पति वा पत्नीबीचका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने!
May 8, 2019 |Pahiloclick
काठमाडौँ: पति वा पत्नीबीच भएका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भएको छ। तर, पति वा पत्नीले स्वीकृति दिएमा भने त्यसलाई प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न मिल्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने
सञ्चारमन्त्रीको घोषणा – आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्का
प्रहरीमा २२ हजार दरबन्दी थप्न माग
नेकपाका स्थानीय नेताको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि मुत्यु
शेर्पाको सम्झनामा यति र तारा एयरलाइन्सले शुक्रबार उडान नगर्ने, यात्रुहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह